Vaovao - Fanasokajiana Organisation Cardigan.
Fantatra amin'ny anarana hoe ambaratonga haavo, fikambanana tokana ihany. Fandaminana fanjaitra: fehiloha amboadia amin'ny fanjaitra feno amin'ny fanjaitra tokana. Ny lamba dia manana extensibility transverse lehibe sy curling, ary mora ny mihintsana rehefa tapaka ny loop.
Fantatra amin'ny lamba kofehy koa fa an'ny sokajy 1 + 1 ary 2 + 2 taolan-tehezana. Ny knitting dia tanterahina amin'ny farafara fanjaitra roa, miditra ao amin'ny asa daholo ny triangles, ary mitovy ny halalin'ny loop. Fandaminana knitting: ny farafara fanjaitra eo aloha sy aoriana dia alamina amin'ny zaitra feno.
-1 + 1 tenona taolan-tehezana
Fantatra koa amin'ny hoe taolan-tehezana tokana. Apetaho amin'ny vozona, cuffs ary hem.
-2 + tenona taolan-tehezana 2
Izy io dia manana ambaratonga avo lenta amin'ny fanitarana sy elastika, ny antsasaky ny fanitarana dia avo roa heny noho ny an'ny lamba voatenona tsotra.
Fantatra ihany koa amin'ny firafitry ny rivotra misy tadiny, izy io dia firafitra mitambatra amin'ny firafitra taolana sy rafitra fanjaitra fisaka. Endri-javatra: ny zaitra fisaka eo anoloana sy eo an-damosina dia tsy misy ifandraisany, amin'ny fanjakana ambony, matevina noho ny hozatra taolana, miaraka amin'ny fihazonana hafanana tsara, ny fanitarana kely eo anelanelany ary ny endrika milamina kokoa.
Tucked lamba miaraka amina farafara fanjaitra tokana, fantatra koa amin'ny hoe voninkazo matavy fanjaitra fisaka. Ny tuck dia afaka mamorona karazana endrika marobe toy ny lamina harato, lamina tsy mitovy, ary lamina maro loko. Noho ny fisian'ny tadivavarana lava dia voakasik'izany ny tanjaky ny lamba ary mora manitatra avy eo.
Organisation voninkazo matavy no anarana mahazatra an'ny Jihua Organization. Raha ny fiorenan'ny tuck no namoronana azy, ny endrika ambonimbony dia mamolavola endrika mifangaro, sns. misy fametahana laharana tokana sy fametahana laharana marobe; misy tuck fanjaitra tokana sy fanjaitra fanjaitra maro.
Ny anarana siantifika amin'ny rafitra miolikolika dia antsoina hoe rafitra mihombo. Amin'ny alàlan'ny famindrana ny fanjaitra fanjaitra, ny zaitra dia voasokitra amin'ny farafara fanjaitra roa.
-Tisy mizana mizana roa
Ny kiran'ny trondro avo roa heny dia antsoina koa hoe tavy tsy manja, ary antsoina koa hoe fanjaitra yuanbao indroa izy io. Izy io dia voatenona amin'ny farafara fanjaitra roa, ary ny fotony dia fametahana roa sosona. Endri-javatra: ny lamba mizana trondro roa dia mora elongate ary mivadika amin'ny làlan-kaleha, izay mampihena ny fitazonana ny endrika fitafiana, fa mihazona ny fihazonana hafanana, ary ny lamba dia manana fahatsapana be sy matevina. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fanjairana fanjaitra.
-Ny tenona Jacquard
Ny tenona jacquard dia karazana tenona izay mifantina ny kofehy ao amin'ilay làlana ary mamorona tadivavarana amin'ny elanelam-potoana iray arakaraka ny fitakian'ny lamina. Rehefa tsy voahodina ny kofehy dia mipetaka amin'ny vodin-dambam-baravarana izy io ary azo amboarina amin'ny fanjaitra tokana. . Endri-javatra: matevina kokoa ny lamba, tsy mora simba, mihitatra miaraka amin'ny tsy fitoviana, ary misy vokany tsara ny lokony.
-Ny fandaminana voninkazo
Ny anarana siantifika amin'ny firafitry ny voninkazo poakaty dia ny rafitra leno, fantatra ihany koa amin'ny firafitry ny voninkazo paiso, izay azo amboarina eo am-pandriana fanjaitra tokana. Ny fanjaitra knitting dia voalamina tanteraka, miaraka amin'ny akanjo tokana ho toy ny rafitra fototra, ary ny zaitra dia nafindra arakaraka ny lamina. Izy io dia be mpampiasa amin'ny stitch bar.